Qatar kuvhura anopfuura zana mahotera matsva eFIFA 100 World Cup
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Qatar Kuputsa Nhau » Qatar kuvhura anopfuura zana mahotera matsva eFIFA 100 World Cup
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Qatar's 184-pfuma-yakasimba portfolio inoumbwa neinenge 32,000 makiyi emakamuri.
Qatar iri kutarisira kukwira FIFA World Cup Qatar 2022.
Anouya zvivakwa chikamu cheQatar zano rekusiyanisa kupa kwayo uye kuwedzera kukwezva kwayo kune vashanyi.
Qatar inowedzera hupfumi hwayo hwepasirese zvinoenderana neQatar National Vision 2030.
Qatar iri kuwedzera 105 mahotera matsva uye mahotera mahotera kune ayo atove akawandisa portfolio yezvivakwa, sezvo nyika ichigadzirira kusimudzira iyo FIFA World Cup Qatar 2022 ™. Izvo zvivakwa zvitsva zvichawedzera kukwidza kweQatar kune vazhinji vevashanyi nekusimudzira ruzivo rwevaenzi, sezvo Qatar Tourism ichienderera mberi nebasa rayo rekushandura nyika kuti ive nzvimbo inotungamira pasi rese.
Imwe inonakidza kuvhurwa kwehotera ichangoburwa ndeye Banyan Tree Doha, nyeredzi shanu-yepamusoro yezvivakwa, yakashongedzwa zvakagadzirwa nemukurumbira wemukati dhizaini Jacques Garcia. Kuvhurwa kwehotera pakona kwegore rino kunosanganisira, semuenzaniso, iyo Pullman Doha West Bay, yechishanu-nyeredzi Accor chivakwa; iyo JW Marriott West Bay, ine inokwezva nekunze kwekunze; uye iyo Steigenberger Hotel, inozivikanwa nekugamuchira kwayo chete vaeni. Imwe yeaya mahotera matsva anopa chinoshamisira kana ruzivo kuQatar's 184-pfuma-yakasimba portfolio, iyo inoumbwa neinosvika 32,000 makiyi emakamuri.
Qatar Airways Boka Chief Executive uye Sachigaro weQatar Tourism, VaAkbar Al Baker, vakati: "Tiri kuenderera mberi nekuwedzera kupa kwedu kwekushanya kuitira kuti vashanyi vafarire zvakanakisa zvekugamuchira vaeni kuQatar tichikwanisa kusarudza hotera, nzvimbo yekutandarira kana imba inoshandirwa. kune yavo bhajeti uye zvavanoda. Izvi zvivakwa zviri kuuya chikamu chedu zano rekusiyanisa chipo chedu uye kuwedzera kukwezva kwedu kune vashanyi. Isu tiri kufara kuwedzera yedu yepasirese yekushanya kupihwa zvinoenderana ne Qatar National Chiratidzo 2030 uye kupa vafambi dzimwe sarudzo kuti vawane zvakanakisa zveQatar. ”
Iyo ichangobva kuvhurwa-nyeredzi shanu Banyan Tree Doha inopa oasis yeumbozha mukati meguta.
Pamusanganiswa webasa nekutamba, iyo Pullman Doha West Bay ine makamuri mazana matatu nemakumi matatu nemashanu nemakamuri makumi mashanu nemakumi mashanu neshanu uye dzimba makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe inofanirwa kuvhurwa gore rino.
Vaya vari kutsvaga kudzikisa maonero edenga reDhaha munguva pfupi iri kutevera vachakwanisa kunakidzwa nekugara pa53-storey JW Marriott West Bay.
Vafambi vari kutsvaga pekugara padyo nendege vachakwanisa kubhuka futuristic 204-kamuri Steigenberger Hotel Doha.
Isabelle Cote anoti:
Svondo 3, 2021 pa 16: 29
Pakupedzisira ndakawana dzimwe sarudzo dzehotera dzeQatar 2022… husiku husina nehusiku hushomai… Vaimboda husiku husiku makumi mana kusvika makumi mana kushoma kweFIFA World Cup. Izvo zvaive RIDICOULUS, vakadzokera kumashure… http://www.WorldCupStadiumHotels.com .